Shwe Thoon 8 Online Media – Page3– Shwe Thoon 8 is favourite news, entertainment, and lifestyle website.
(၃) ယောက်မြောက် The Voice Myanmar Winner ကြီးကို ပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တဲ့ Team RZN အဖွဲ့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောလာတဲ့ ကျားပေါက် ..
အဆိုတော်ကြီးရင်ဂိုရဲ့သားဖြစ်သူ အဆိုတော် ကျားပေါက်ကတော့ အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကတည်းက အနုပညာကို ဝါသနာပါခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားပေါက်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အောင်မြင်တဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုနီးပါး လျှောက်လှမ်းခဲ့သလို ဂီတမှတ်တိုင်တွေများစွာကိုလည်း စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟန်ထူးလွင်က The Voice
မိဘတွေကို တစ်လသိန်း(၃၀) ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေနဲ့ ကားတွေပါ ဝယ်ပေးထားတဲ့ မြင့်မြတ်အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဂျူဂျူးပန်ထွာ …
သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်ကတော့ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖြေကြားထားတဲ့ အင်တာဗျူးဗီဒီယိုကြောင့် ပရိသတ်တွေဝေဖန်ခြင်းကို ခံနေရသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မြင့်မြတ်က သားဆိုးသားမိုက်တစ်ယောက်မဟုတ်မှန်းသိကြသလို တစ်ဖက်ကလည်း သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်က ပြောတာကြောင့် ဘယ်ဟာက အမှန်လဲဆိုတာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေတာပဲ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာကို ကမ္ဘာကပါသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ခင်ရတနာစိုးအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ သဘင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဖိုးချစ် ..
မို့ရွှေမင်းသားချောတစ်ယောက်အဖြစ် ဇာတ်သဘင်လောကမှာ အောင်မြင်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်ထားသလို ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်ကိုတော့ လူကြီး၊ လူငယ်ပရိသတ်တွေအားလုံး ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ သဘင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်လောက တိုးတက်ဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားအားထုတ်နေသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ဖိုးချစ်က
ကေတီဗီအခန်းထဲတွင် အလုပ်သမားနှင့် ချစ်တင်းနှောနေသည့် ခင်ပွန်းကို မယားက အမှုဖွင့် ..
ကေတီဗီအခန်းထဲတွင် အလုပ်သမားနှင့် ချစ်တင်းနှောနေသည့် ခင်ပွန်းကို မယားက အမှုဖွင့် ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ကွင်းတောင်ရပ်ကွက်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီခန့်က ကေတီဗီခန်းထဲတွင် ချစ်တင်း‌နှော နေသော ခင်ပွန်းနှင့် အလုပ်သမားကို အမှုဖွင့်ထားကြောင်း
မြန်မာပြည်မှာ ထမင်းငတ်လို့ သေတဲ့ မသာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကား မှန်သေးရဲ့လား? ..
မြန်မာပြည်မှာ ထမင်းငတ်လို့ သေတဲ့ မသာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကား မှန်သေးရဲ့လား? စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းမြို့ ရပ်ကွက်အချို့က အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ လောက်ဟာ ကပ်ဘေးကာလမှာ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေလို့၊ မြစင်္ကြာဘုန်းကြီးကျောင်းအနီးမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပြန်စွန့်မယ့် ဆွမ်းနဲ့ဟင်းတွေကို
အားသှငျးကွိုးအတုနဲ့ ဖုနျးအားသှငျးမိခဲ့လို့ နအေိမျ 3လုံးခနျ့ မီလောငျကြှမျးခဲ့ရတဲ့အဖွဈ …
အားသှငျးကွိုးအတုနဲ့ ဖုနျးအားသှငျးမိခဲ့လို့ နအေိမျ 3လုံးခနျ့ မီလောငျကြှမျးခဲ့ရတဲ့အဖွဈ ကိုယျအသုံးပွုနကေဖြုနျးရဲ့ မူရငျးအားသှငျကွိုနဲ့မဟုတျဘဲ ဖုနျးအားသှငျးမိမယျဆိုရငျတော့ အတျောလေး သတိဝီရိယ ရှိသငျ့ပါတယျ ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ December 4ရကျနေ့ ည 8နာရီအခြိနျခနျ့က မလေးရှားနိုငျငံ ၊
ဝဖေနျမှုတှခေံနရေတဲ့ မွငျ့မွတျ ဘကျကနပွေတျသားစှာရပျတညျပွီး အဖွဈမှနျတှကေိုပွောပွလိုကျတဲ့ ယုနျလေး ..
ဝဖေနျမှုတှခေံနရေတဲ့ မွငျ့မွတျ ဘကျကနပွေတျသားစှာရပျတညျပွီး အဖွဈမှနျတှကေိုပွောပွလိုကျတဲ့ ယုနျလေး ဘယျသူ ဘာဖွဈဖွဈ သူကူညီတယျ .စကျအဖှဲ့ က အရမျးရငျးတဲ့ လူတှရေောမရငျးတဲ့ လူတှေ ရော ဆေးရုံတကျတာတို့ .တဈခုခု အဆငျမပွဖွေဈတာတို့ သူကူတယျ .လူတိုငျး ကို
သှားကိုကျနသေူ၊ သှားပိုးပေါကျရှိနသေူမြားအတှကျ အမှနျတဈကယျ သကျသာစတေဲ့ ဆေးနညျး ..
သှားကိုကျနသေူ၊ သှားပိုးပေါကျရှိနသေူမြားအတှကျ အမှနျတဈကယျ သကျသာစတေဲ့ ဆေးနညျး သှားကိုကျနရေငျ လေးညှငျးပှငျ့ကို ဒီလိုသုံးလိုကျပါ။သှားကိုကျတာ ဘယျလောကျထိခံရခကျလဲဆိုတာတော့ သှားကိုကျဖူးတဲ့သူပဲ သိပါလိမျ့မယျ။ သှားလေးကိုကျတာပဲ ဘာဖွဈလို့လဲလို့ တှေးမိမဲ့သူရှိနိုငျပမေဲ့ သှားကိုကျတာဟာ ထိုငျမရထမရ အိပျမရ စားမရနဲ့ အသညျးကှဲဝဒေနာထကျ ဆိုးတယျဆိုတာ
ပုံမှနျတဈနနှေ့ဈကွိမျ သောကျပေးခွငျးဖွငျ့ သှေးတိုးရောဂါရှိသူမြားအတှကျ သှေးတိုးခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျ …
ပုံမှနျတဈနနှေ့ဈကွိမျ သောကျပေးခွငျးဖွငျ့ သှေးတိုးရောဂါရှိသူမြားအတှကျ သှေးတိုးခွငျးမှ ကာကှယျနိုငျ ရုတျတရကျ သှေးတိုးနတေဲ့အခါမြိုးမှာ ခေါငျးမူးခွငျး ၊မကျြနှာအဈမို့ခွငျး ၊ ဇကျကွောထိုးခွငျး မြား ခံစားရပါတယျ ။ သှေးပေါငျခြိနျ အမြားကွီးတကျနတောဟာ အသကျအန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့အထိကို အန်တရာယျရှိပါတယျ ။ ဒီလို
ဈေးဆိုငျအိမျဆိုငျအှနျလိုငျးရှော့ အပါအဝငျဈေးသညျမှနျသမြှဈေးရောငျးကောငျးစတေဲ့ယတွာအစီအရငျ ..
ဈေးဆိုငျအိမျဆိုငျအှနျလိုငျးရှော့ အပါအဝငျဈေးသညျမှနျသမြှဈေးရောငျးကောငျးစတေဲ့ယတွာအစီအရငျ ဈေးဦးတောငျ မပေါကျသော ၊အရောငျးအဝယျအရမျးကိုခကျခဲ နသေော ရောငျးကုနျပစ်စညျးမြိုးစုံ အတှကျ လကျတှသေိ့သိသာသာ ရောငျးကောငျး ဈေးဦးပေါကျစသေော ယတွာလေးတဈခု ပွောပွမယျ။ ကုနျစုံဆိုငျ၊ ဆိုငျထိုငျ ရောငျးသောသူဖွဈစေ ၊ဆိုငျခနျးမရှိ ကား ၊လှညျး သို့မဟုတျ